Magaalada hareereysan ee Falluja. - BBC Somali
Magaalada hareereysan ee Falluja.
Falluja waa magaalo ay Carabta Sunnidu ku badan tahay oo 65km galbeedka ka xigta magaalada caasimadda Baqdaad, waxayna aheyd meel ay awood ku lahaayeen falaagada.
Militeriga Mareykanka, ayaa labo dagaal ku galay magaalada sanadkii 2004-tii, waxayna ujeedkoodu ahaa inay ka saaraan magaalada ururka Al-qaacidda iyo kooxo kale oo ka horjeeday faragelintooda dalka.
Toban sano kaddib, dagaallamayaasha kooxda Khilaafada Islaamka, ayaa qabsaday Falluja xilli ay socdeen dibadbaxyo waaweyn oo ay Sunnida deegaanka kaga horjeedeen xukuumadda Shiicada hoggaamiso oo siyaasadaheedu kooxeysigu ahaayeen.
Dhammaadka bishii May sanadkii 2016, ayey ciidamada ammaanka Ciraaq iyo dabley dowladda taageersan ku soo dhawaadeen magaalada, iyagoo isku dayaya inay dib u qabsadaan.
Qandaraaslayaal la dilay.
Falluja, waxaa looga yaqaan Ciraaq magaalada masaajidyada oo aheyd magaalo diimeed ka hor intuusan Mareykanku qaadin faragelintii bishii March sanadkii 2003-dii lagu riday Saddam Xuseen. Waa mid ka mid ah goobaha badan ay Islaamiyiintu galeen markii dowladdii Saddam la riday.
Falluja, ayaad aad uga hortimid faragelinta ciidamada Mareykanka, waxayna ciidamada Mareykanku la kulmeen dagaal lagu baaba'ay bilowgii sanadkii 2003dii. Waxayna dagaaladaasi oo kordhay ku riixeen Mareyanku inuu ciidamadiisa kala baxo magaalada.
Afar qandaraaslayaal Mareykan ahaa, kana tirsanaa shirkadda Blackwater, ayey dabley hubeysan ku dileen bartamaha magaalada bishii March sanadkii 2004-tii, iyagoo kaddibna gubay meydkooda. Mid ka mid ah meydka, ayaa laga soo laalaadiyay buundo. Muuqaal laga duubay weerarka, ayaa dunida oo dhan laga daawaday. Xukuumadda madaxweyne George W Bush, waxay ku amartay ciidamada Mareykanka inay soo celiyaan xukunka magaalada, kana saaraan falaagada.
Dhibaato ayey kala kulmeen magaalada kaddib markii dadka deegaanka ay u istaageen difaaca magaalada, iyadoo waxyeelada rayidka keentay dibadbaxyo iyo weeraro ka dhaca meelaha kale ee Ciraaq. Maalmo gudahood, ayaa lagu heshiiyay xabad joojin. Mareykanka ciidamadoodu ayey dibadda ula baxeen, waxayna magaalada Falluja noqotay meel ay ku xooggan yihiin falaagooyin ay ku jiraan Al-qaacidda.
Bishii November ayey 12,000 oo ciidamda Mareykanka ah iyo 2,500 oo kuwa ciraaq ah weerar ku qaadeen magaalada, si ay uga saaraan falaago lagu qiyaasay 4,000 oo la rumeysnaa inay gudaha magaalada ku jiraan. Toddobaad gudihiis ayey ciidamadu ku qabsadeen magaalada, inkastoo ay jireen dagaalo goos goos ahaa oo socday ilaa bishii December.
Qaramada Midoobay, ayaa walaac ka muujisay badqabka 50,000 rayid lagu qiyaasay oo gudaha Falluja ku jira, kuwaasi oo ay ku yartahay cuntada, daawada iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah.
Militeriga Ciraaq, ayaa kula taliyay rayidka inay isaga baxaan Falluja, iyadoo loo sheegay kuwa aan ka bixi karin inay taagaan calan cad.
In ka badan 80 ciidamada Mareykanka, ayaa dagaalka lagu dilay, iyadoo lagu qiyaasay inay ka dhinteen falaagada 2000. Waxaana ku burburay dhismayaal ay ku jiraan 60 ka mid ah 200 ee masjid, waxaana ku barakacay 300,000. Magaalada ayaa gashay sanadihii xigay degenaasho la'aan.
Sanadkii 2013, ayey kooxda Khilaafada Islaamka Ciraaq (isis) ka faa'ideysteen khilaafka siyaasadeed ee dowladda ay hoggaaminayeen Shiicada Ciraaq iyo Carabta Sunnida oo ka cabanayay in bartilmaameed ay u noqdeen dagaalka argagixisada.
Bishii March sanadkii 2014-tii, ayuu amray ra'iisul wasaare Nouri Maliki in ciidamada ammaanka ay burburiyaan dhismooyinka dibadbaxayaasha ee jiray in ka badan sanadka. Kooxda Khilaafada Islaamka ayaa qabsatay Falluja iyo in badan oo ka tirsan Ramadi, iyagoo caawin ka helaya qabaa'ilka deegaanka iyo taageerayaashii Saddaam.
Lix bilood kaddib, ayey kooxda Khilaafada Islaamku qabsadeen magaalada labaad ee Mosul iyo badi waqooyiga iyo galbeedka Ciraaq iyadoo kaddibna ku dhawaaqay dhismaha Khilaafada, waxayna magacoodu ka dhigeen Khilaafada Islaamka.